သက်တန့်ချို: Facebook Fan Page ပြုလုပ်၍ ဘလော့ဂ်တွင်ထည့်သွင်းခြင်း
Facebook Fan Page ပြုလုပ်၍ ဘလော့ဂ်တွင်ထည့်သွင်းခြင်း
ဖေ့ဘုတ်သုံးသူတစ်ယောက်အတွက် ရိုးရိုး ပရိုဖိုင်းအကောင့်ဟာ အယောက်ငါးထောင်ပဲလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် တို့ သိခဲ့ကြပြီးသားပါ ။ Fan Page ပြုလုပ်နည်းလေးမပြောခင် ရိုးရိုးပရိုဖိုင်းအကောင့်နဲ့ ဖန်ပေ့ခ်ျက ဘာ ကွဲ သလဲ နည်းနည်းလေး ရေးချင်ပါတယ် ။
၁ ။ ဖန်ပေ့ခ်ျသည် ကိုယ့်ကို like လာလုပ်သူတွေရဲ့ ပရိုဖိုင်းတွေထဲကို ဖရန့်လိုမျိုး ၀င်ကြည့်လို့မရပါဘူး ။
၂ ။ ကိုယ်တင်တဲ့စာမှန်သမျှကို like လုပ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ Home ကနေဖတ်လို့ရပြီး ကိုယ်ကတော့ သူများ ပရိုဖိုင်း ထဲကစာတွေဖတ်လို့မရပါ ။
၃ ။ အမှတ်တရ အနေနဲ့ ကိုယ့်ပရိတ်သတ် Fan စုထားပြီး စာတွေတင်ချင်တဲ့အခါ ဖန်ပေ့ခ်ျကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ။
၄ ။ ဖန်ပေ့ခ်ျကို မက်ဆေ့ပို့လို့မရပါ ။ လိုအပ်လျှင် wall မှာ ရေးလို့ရပါတယ် ။ ရေးလို့မရအောင်လည်း ပိတ်လို့ရ ပါတယ် ။
၅ ။ like လုပ်ထားတဲ့သူတွေထဲကနေ ban ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်လည်း Ban user လုပ်လို့ရပါတယ် ။
ကဲ အပြောလေးတွေလျော့ အလုပ်လေးတွေလုပ်ကြရအောင် ။
၁ ။ http://www.facebook.com ကိုဖွင့်ပြီး မိမိ အကောင့်နှင့်ဝင်ပါ ။
၂ ။ ပြီးလျှင် အောက်ပါလင့်ကိုဖွင့်ပါ ။
ထိုအခါ ပုံပါအတိုင်းမြင်ရမည် ။
၃ ။ ပြီးရင် နှစ်သက်ရာ ခေါင်းစဉ်အား ကလစ်နှိပ်၍ နာမည်ရေး I agree to Facebook Pages Terms ကို အ မှန်ခြစ်ပြီး Get Started ကိုနှိပ်ပါ ။
၄ ။ ပြီးလျှင် Step 1 ,2,3တွေ့ပါလိမ့်မည် ။
Upload an image ကိုနှိပ်ပြီး ကွန်ပြူတာထဲက မိမိတင်ချင်သော ပရိုဖိုင်းပုံကိုရွေးတင်နိုင်ပါသည် ။ ၀ဘ်ဆိုက် တစ်ခုခုမှ ပုံကိုလည်း Importaphoto လုပ်ပြီးတင်နိုင်ပါသည် ။ ပြီးလျှင် Continue လုပ်ပါ ။
Invite friend ကိုနှိပ်ပြီး မိမိသူငယ်ချင်းများကို ဖိတ်နိုင်ပါသည် ။ Share your page တွင် မိမိတွင် contact list ရှိပါက Import contacts ကိုနှိပ်ပြီးထည့်နိုင်သည် ။ Share this page on my wall နှင့် Like this page ကိုအ မှန်ခြစ်ထားပါ ။ ပြီးလျှင် Continue ကိုနှိ်ပ်ပါ ။
Website အကွက်တွင် မိမိ ဘလော့လိပ်စာထည့်ပါ ။
About တွင် ယခုလုပ်သော ဖန်ပေ့ခ်ျနှင့်ပတ်သတ်၍ အတိုချုပ်ရေးပါ ။
ပြီးလျှင် Continue ကိုနှိပ်ပါ ။
၅ ။ ပုံပါအတိုင်း အမှတ်စဉ် လေးခုတွေ့ရပါမည် ။
1.Invite your friends ( သူငယ်ချင်းတွေဖိတ်ဖို့ )
2.Tell your fans ( နောက်ပိုင်းကိုယ့်ဆီမှာ like လုပ်သူများလာရင် သူတို့ကိုပြောဖို့ Import contacts ကိုနှိပ်ပြီးလည်း Contact ထည့်နိုင်ပါတယ်)
3.Post status updates ( Post Update ကိုနှိပ်ပြီး Welcome ကြိုဆိုပါတယ် ဘာညာ စရေးကြည့်ပါ ပြီးတော့ ပို့စ်တွေ စတင်လို့ရပါပြီ )
4.Promote this Page on your website ( အဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ ကျန်တာတွေဘာ မှမလုပ်ပဲကျော် လာခဲ့လို့ရ တယ် ဒီနေရာမှာ ဘလော့မှာ ဖန်ပေ့ခ်ျဘယ်လိုထည့်သလဲဆိုတာ ပြောသွားပါ့မယ် )
Add like box ကိုမနှိပ်ခင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ပေ့ခ်ျရဲ့လိပ်စာလေးကို ကော်ပီကူးထားပါ ။ ပုံမှာ အပြာခြယ် ထားတဲ့နေရာအထိ
ဆိုတဲ့ လိပ်စာမှာ ? ရှေ့အထိပဲ select လုပ်ပြီး ကော်ပီကူးရမှာပါ ။ http://www.facebook.com ကနေစပြီး question mark ရှေ့က ဂဏန်းတွေအထိ တောက်လျှောက်သည် ကိုယ့်ဖန်ပေ့ခ်ျရဲ့လိပ်စာဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒါ ကို ကော် ပီကူးထားပါ ။ Note pad ထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ။
Add like box ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ ။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းနမူနာ စာမျက်နှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီမှာ Facebook Page URL ဆိုတဲ့နေရာမှာ ခုန က ကော်ပီ ကူးထားတဲ့လိပ်စာလေးကို Paste လုပ်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် Width အကျယ်ကိုကိုယ့်ဘလော့နဲ့တိုင်းပြီးထည့်ရပါ့မယ် ။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်က ဘယ်နေရာ မှာထည့်မှာ လဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပါတယ် ။ Side bar မှာထည့်မှာလား ဒါမှမဟုတ် ပို့စ်အပေါ်မှာထည့်မှာလား ။ ဆိုက်ဘားမှာ ဆိုရင်တော့အများစုက Width 220 ၀န်းကျင်လောက်ရှိပါတယ် ဒီထက်များတဲ့ ဘလော့တွေလည်းရှိပါတယ် ။ သင့်တော် သလိုထည့်ပါ ။
Height ကတော့ ကြိုက်သလောက်ထည့်ပါ ။ 350 , 400 လောက်ဆိုအတော်ပါပဲ ။ Color Scheme ကတော့ Dark နဲ့ Light နှစ်မျိုးရှိပါတယ် ။ ကိုယ့်ဘလော့နောက်ခံအရောင်နဲ့ ချိန်ပြီး နှစ်သက်ရာ ရွေးပါ ။
Show Faces ကို အမှန်ခြစ်ထားပါ ။
Border Color မှာ ဘာမှမထည့်လည်းရပါတယ် ။ အဖြူရောင်ကို default ပေးထား ပါတယ် နှစ်သက် ရာ အရောင် ထည့်နိုင်ပါတယ် ။
Stream ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ Update တွေပုံတွေစာတွေ တိုက်ရိုက်ပေါ်နေတာမျိုးပါ ။ နှစ်သက် ရင် လည်းအမှန်ခြစ်ထားပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့ လူမျက်နှာလေးတွေပဲ ပေါ်စေချင်တဲ့အတွက် အဲဒီအကွက် ကိုဖြုတ်ထားပါတယ် ။ အဲဒါအမှန်ခြစ်ထားရင် Height က ရှည်သွားပါလိမ့်မယ် ။
Header မှာ Show header ကိုအမှန်ခြစ်ပါ ။ ပြီးရင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
ပြီးရင် Get Code ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ ။ ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း အဲဒီခါ ကုတ်သုံးမျိုးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။
HTML5 ရယ် XFBML ရယ် IFRAME ရယ် သုံးခုရှိတဲ့နက် IFRAME ကိုနှိပ်ပါ ။
ပြီးရင်အကွက်ထဲက ကုတ် တွေအကုန်လုံးကော်ပီကူးလိုက်ပါ ။ ကော်ပီကူးပြီးရင် အဲဒီစာမျက်နှာကို ခဏထားပြီး Tab တစ်ခုအသစ်ဖွင့်ပြီး http://www.blogger.com ကို မိမိဘလော့အကောင့်ဖြင့် ၀င်လိုက်ပါ ။
ပြီးလျှင် Save လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း မိမိဘလော့တွင် Fan Page အ ကွက်လေးပေါ်နေ မှာဖြစ်ပါကြောင်း ။
ကဲ Fan Page တော့ပေါ်နေပြီ ဘယ်လိုသုံးရမလဲ အဲဒါက အဓိကကျပါတယ် ။ တချို့က လုပ်တော့လုပ်ထားတယ် မသုံးတတ်တော့ အဲဒီပေ့ခ်ျက သေနေသလိုဖြစ်နေပြီး like ဦးရေက မတက်လာဘူး ။ ဖန်ပေ့ခ်ျသည် ဘလော့ ကစာတွေ တိုက်ရိုက် သူ့အလိုလို ဖေ့ဘုတ်မှာ သွားပေါ်နေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုယ်က တင်ပေးမှသာရပါတယ် ။ ဘယ်လိုတင်မလဲဆိုရင် ခုနကအတိုင်း ဖေ့ဘုတ်မှာ မိမိအကောင့်နဲ့ ၀င်လိုက်ပါ ။
ပြီးရင် Home ဘေးရှိ မျှားလေးအားနှိပ်လိုက်ပါက မိမိလုပ်ထားသော Fan Page ပေါ်လာလိမ့်မယ် ။ ထိုအခါ Use Facebook as အောက်မှ မိမိပေ့ခ်ျအားနှိပ်လိုက်ပါ ။ ထိုသို့နှိပ်လိုက်ပါက မိမိသည် ဖန်ပေ့ခ်ျအနေနှင့်ရောက် သွားပါ လိမ့်မည် ။
ပရိုဖိုင်းအကောင့်နှင့်မဟုတ်တော့ပါ ပုံအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီအခါ ဖန်ပေ့ခ်ျအနေနှင့် ပုံများတင်ခြင်း စာ များရေးခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ ပုံတင်တာကတော့လွယ်ပါတယ် ။ wall မှာ တင်သည်ဖြစ်စေ photo ထဲ သွားပြီး album တခုစီလုပ်ပြီး ခွဲတင်သည်ဖြစ်စေ တင်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါကလွယ်တယ် note ဘယ်လိုရေး ရမလဲ ?? အိုကေ Home ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
ဘယ်ဖက်ဘားရှိ Apps ဟူသောနေရာတွင် Notes , Photos , Questions , Links စသည်များကို ပုံပါအ တိုင်းတွေ့ရပါမည် ။ ထိုအထဲကမှ Notes ကိုရွေးပြီးတင်လျှင် ဖန်ပေ့ခ်ျတွင် note များပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ။ သိထားဖို့က ဖန်ပေ့ခ်ျအနေနဲ့တင်တဲ့ note တွေ photo တွေဟာ မိမိ နဂို ပရိုဖိုင်းအကောင့် မှာ ပေါ်မှာမ ဟုတ်ပါဘူး ။ ဖန်ပေ့ခ်ျမှာသာ ပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ ။ နောက်ပိုင်းမှ Welcome Page ထည့်နည်းတွေနဲ့ တခြား apps တွေထည့်နည်းတွေပြောပေးသွားပါ့မယ် ။ အခုတော့ဒီလောက်ပါပဲ ။
မရှင်းလင်းခဲ့ရင်မေးသွားနိုင်ပါတယ် ။ ပြန်ဖြေပေးပါ့မယ် ။ (ဆရာကြီးလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါ မသိသေးသော ဘလော့ ပိုင်ရှင်များ မလုပ်တတ်သောသူများအတွက် ဖြစ်ပါသည် ။ )
Posted by သက်တန့်ချို at 4:10 PM
Labels: အိုင်တီနှင့်ပတ်သတ်သမျှ, နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများ
925 February 3, 2012 at 6:06 PM
EEE....တိုင်းကျူး mr.Rainbow ရေ
WWKM @နန်းဝါ၀ါမောင် February 3, 2012 at 6:22 PM
ခုလည်း ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ရှေ့ပိုင်းရှင်းလာပေမယ့် နောက်ပိုင်းစာတွေဖတ်ပြီး ဦးနှောက်ခြောက်သွားလို့ ပတ်စ်ဝပ်ကလေးပေးပြီး ဆရာ့လက်ကို အပြီးအပ်လိုက်တာပဲ ကောင်းမယ် ထင်ပါရဲ့.. :))
ဒီအတိုင်းလေးပဲသဘောကျလို့ လုပ်တော့ဖူးဗျား)း)
naymin February 3, 2012 at 9:56 PM
ကျွန်တော် blog လေးကိုလည်းလာလည်ပေးပါဦး..
ma swe zin February 3, 2012 at 10:56 PM
ဖတ်၇င်းနဲ.၇ှုတ်လာလို. P,W ပေးမယ်..Do ပေးမလား ကျေးဇူးပါ
sai naung naung February 4, 2012 at 12:41 AM
လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ရှုပ်ကုန်ပြီ မလုပ်တတ်တော့ ဘူး :(
သက်တန့်ချို February 4, 2012 at 9:33 AM
မ၀ါ > နောက်ပိုင်းဘယ်အဆင့်မှာ မရတော့တာလဲ စမ်းကြည့်ပါဦး နောက်ဆုံးမရရင်တော့ မ၀ါ အဆင်ပြေသလိုပြောပါ ကူညီပါ့မယ် ။
ဆရာမရွှေစင် > ဘယ်နားမှာ ဖတ်ရင်းနဲ့ ရှုတ်သွားတာလဲဟင် ရှင်းပြပေးပါ့မယ် Do ပေးမလားဆိုတော့ Do ပေးပါ့မယ် မက်ဆေ့သာပို့လိုက်ပါ ။
Sai naung naung> ဘယ်နားရှုပ်သွားတာလဲ
ဘယ်အဆင့်မှာ မရတော့သလဲဆိုတာ သိရရင်ကောင်းမယ် ကျွန်တော်ပုံတွေနဲ့ပြထားပါတယ် လွယ်ပါတယ် ။
မြသွေးနီ February 6, 2012 at 9:18 AM
မမြသွေးတို့လို လူမျိုးတွေအတွက် ဒီပို့စ်လေးရေးဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်။ ဆရာ့ကောင်းမှုနဲ့ Fun Page လေး ဖြစ်ခဲ့ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာသက်တန့်ရေ..။
mstint February 6, 2012 at 10:05 AM
တီတင့်ဘလော့က Fun Page ကိုမြင်တိုင်း
ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) February 8, 2012 at 4:19 PM
ကျွန်မ Fun Page မှာ
Get Started ဆိုတာရော...Add Like Box ဆိုတာရော မရှိတော့ဘူး။
အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ဆရာအားရင် ရှင်းပြပါဦးနော်..
သက်တန့်ချို February 9, 2012 at 5:48 PM
မဝေ ရေ မဝေရဲ့ဖန်ပေ့ခ်ျလင့်ကို အဆင့်ငါးအောက်ကအတိုင်းကူးလိုက်ပါပြီးရင်အောက်မှာပေးထားတဲ့လင့်ကိုဖွင့်လိုက်ပါ ။
ဒါဆိုရင်အဆင့် ငါး အောက်ကအဆင့်တွေကိုမြင်ရမှာပါ ရမယ်လို့ထင်ပါတယ် ခင်ဗျား)
ဝေ(စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်) February 13, 2012 at 1:11 PM
kokyawkyawcho June 11, 2012 at 5:05 PM
fun page ကလုပ်ပြီးသွားပြီ Blog မှာရေးသမျှ funpage မှာသွားပေါ်နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ ပြောပြပေးပါလား အားပေးလျှက်
nini December 18, 2013 at 6:05 PM
Create fan page လုပ်တဲ့ Step 1 မှာ Upload an image ဆိုတာကို ရှာလို့မတွေ့ဘူး။ ပုံစံချင်းလည်းမတူဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဘာလိုလည်းမသိဘူးနော်။ ရှင်းပြပါအုံး။
nini December 18, 2013 at 6:07 PM
်fun page လုပ်တာ step 1 က upload an image ကိုမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပုံစံချင်းလည်းမတူဘူး